महाकाली सिचाई आयोजना तेस्रो चरणले प्राथमिकता पाएन | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
महाकाली सिचाई आयोजना तेस्रो चरणले प्राथमिकता पाएन
आज महाकाली सिचाई परियोजनाको काम सुरु भएको दश वर्ष भन्दा पनि बढी भई सक्यो । खनिएको मूल नहरमा सिसम तथा अन्य रुखहरु उम्रिरहेका छन् । त्यो नहर प्रणालीलाई आधुनिक बनाई चाडै निर्माण कार्य पुरा गर्ने काममा यहाँका सांसदहरुको ध्यान गएको महसुस भईरहेको छैन । मूल नहरको निर्माण कार्य तथा सिघ्र सम्पन्न गरी शाखा नहरहरुको डि.पी. आर. तयार भएको नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा त्यो नगरी मूल नहरलाई प्राथमिकतामा नराखी मतदाता लोभ्याउन पार्टीहरुले आफ्ना सांसद मार्फत सांसद कोषको रकमबाट नहर लाग्ने ठाउँमा डीप बोरिङ गर्ने कार्यमा तल्लीन रहेका छन् । हामी सांसद र जनतालाई पनि के भन्न चाहन्छौं भने स्थिर हुने काममा रकम खर्च गरौं सांसद कोषको रकमको त नाम मात्र हो त्यो कोष नेपाली जनताले तिरेको करको पैसा हो । जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ दिने खर्च गर्ने होइन बरु सबै सभासदहरुका नामको रकम पहाड तर्फ नदी गाउँको कुलो बनाउन सकिने ठाउँमा कुलो र नसकिने ठाउँमा आकाशे पानीको तलाउ बनाई दिएमा त्यो सफल हुनेछ ।
तराईको हकमा जहाँ नहरको योजना छैन नहर लाग्दैन त्यहाँ योजना बनाई बोरिङको लागी पानी प्रयोगमा ल्याउने काम गर्नु उत्तम हुनेछ । जो जो सांसदका नजिकका कार्यकर्ता छन् त्यहाँ चोर बाटोबाट डीप ट्युवेल दिन उपयुक्त हुदैन पिछडिएको ठाउँमा आफ्नो क्षेत्र नभए पनि अरु क्षेत्रका सांसद सित समन्वय गरी सिचाईको लागी डीप ट्युवेल हुन जरुरी छ । पहुचवालाले पाउने पहुच नभएका स्वतन्त्र व्यक्तिको एरियामा सिचाईको बन्दोबस्त नगर्नु कानून संगत छैन । पहाडी जिल्लाको भूगोल ठूलो भए पनि सांसद संख्या भने एक जना मात्र छ । सांसद काषको लगानी लगाउने भए पनि कहाँ कहाँ के कामको लागि लगाउने हो केही देखिनेवाला छैन । सांसद संख्यागत एक मात्र हुँदा ठूलो जिल्लाको सांसद एक मात्र छ कोष बढाउन कसैले माग गर्दैन । जनताको केही चल्ने वाला छैन । हाम्रा सांसदहरु विरोध गर्न सक्ने खालका छैनन् । दक्षिण तर्फकाले किनिसके जस्तो छ किन कि दक्षिणको बहुमत पुर्याई नेपाललाई अर्कै नेपाल बनाउने षडयन्त्र गर्नु परेको छ । दुर्गम जिल्लाको विकास गर्न कठीन हुन्छ र बढी जनसहभागिताको आवश्यकता पर्दछ । पहाडी भेगका जनताले त पेट पाल्नकै खातिर भारतका उत्तरी भेकतर्फ जानु परेको छ । कोही स्याउ टिप्न जान्छन् भने कोही ढुङ्गा तोड्न ।
नेपालमा पनि धेरै खनिज पदार्थ छ तर खोज गरी उत्खनन् गर्ने कोही छैन । विभिन्न समयमा खानीहरुको संरक्षण र उत्खनन्को लागि सर्वेक्षण टोली आएर अनुसन्धान गरिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । नेपालमा भएका खनिज पदार्थहरुको उत्खनन् तथा प्रवद्र्धनको लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर यथाशिघ्र काम कारवाहीहरु अगाडी बढाउनु जरुरी देखिन्छ । देशको विकास र समृद्धिको लागि यो कदमलाई वैज्ञानिक ढंगबाट अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा बेरोजगारी समस्या दिनानुदिन बृद्धि भईरहेको अवस्थामा यस्ता खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरी प्रयोगमा ल्याउन सके देशको आर्थिक बृद्धिदर बढ्ने र दक्ष बेरोजगार युवाहरु विदेश पलायन हुनबाट रोकिने छन् । नेपालमै युवाहरुलाई रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गरियो भने खाडी मुलुकहरुमा गएर कडा परिश्रम गरेर पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त गरिनु पर्दछ । विदेशमा नेपाली युवाहरुले विभिन्न समस्याहरु झेल्दै आईरहेका छन् । विदेशमा जान गरिव किसानका छोराछोरीले घर जमिन बन्दकीमा राखेर ऋण लिएर खाडी मुलुकतिर जान्छन, तर त्यहाँ भनेजस्तो न त तलब नै पाईन्छ न त खानबस्न नै उचित व्यवस्था हुन्छ । केही युवाहरुले त विदेशमा गएर काम गरेको पैसा समेत नपाउने गरेका छन भने अलपत्रमा परेर दुःख झेल्नु परेको छ । यस तर्फ सरकारको गम्भिर ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । सरकारले नेपालमै स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउन प्रेरित गराउनुपर्दछ । दक्ष बेरोजगार युवाहरुलाई खाडी मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त गरिनै पर्दछ ।
← सुदूरपश्चिममा २२८ जनामा कोरोना पुष्टि
नेपालको संविधान २०१९ – भाग ५ →